WordPress အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်အားသာချက်များကိုပြုလုပ်ခြင်း Martech Zone
WordPress အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ခြင်း - Pros and Cons
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 24, 2016 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org ယနေ့ခေတ်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းတွင်အသုံးပြုနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်တိုးတက်နေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များ (သို့) သီးခြားလွတ်လပ်သောဘလော့ဂ်များပလက်ဖောင်းများဖြစ်သောကြောင့်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် WordPress ကိုကျော်လွှားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဆက်ကပ်အပ်နှံထား WordPress သည် hosting ကိုစီမံသည် ပလက်ဖောင်းပြောင်းလဲပါပြီ။ ငါတို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ် Flywheel ဘို့ Martech Zone နှင့်ရလဒ်များနှင့်အတူ ecstatic ပါပြီ။
လုပ်ငန်းတွင် WordPress အသုံးချခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ငါ WordPress အတွေ့အကြုံကိုပြိုင်ပွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချင်ပါတယ်။ သင့်တွင်ကား (WordPress)၊ ကားမောင်းသူ (သင့် ၀ န်ထမ်းများ)၊ သင်၏အင်ဂျင် (themes များနှင့် plugins များ) နှင့်သင်၏ပြိုင်ကားလမ်းကြောင်း (သင်၏အခြေခံအဆောက်အအုံ) ရှိသည်။ အကယ်၍ ဤအရာများထဲမှတစ်ခုမှမရှိလျှင်သင်ပြိုင်ပွဲကိုရှုံးသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးများစွာသည် WordPress ပြောင်းရွှေ့မှုနှင့်အတူကျရှုံးခဲ့ပြီး WordPress ကိုအပြစ်တင်ကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ပြissueနာဖြစ်မတွေ့ဖူးဘူး WordPress.
လုပ်ငန်းအတွက် WordPress ၏ကောင်းကျိုးများ
လေ့ကျင့်ရေး - သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက WordPress.org တွင်အရင်းအမြစ်များများစွာရှိပြီး Youtube ၌ဗွီဒီယိုများရှိသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်လျှောက်လုံးတွင်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါဘူး WordPress ကိုဆောင်းပါးများ, ဒါပေါ့။
သုံးစွဲမှုလွယ်ကူခြင်း - စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အစတွင်မလွယ်ကူသော်လည်း၊ WordPress ကိုထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူတို့ရဲ့အယ်ဒီတာကမယုံနိုင်လောက်အောင်အားကောင်းတယ် (h1, h2, h3 ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်တွေကိုဒီကုဒ်ထဲမသွင်းသေးဘူးလို့ငါ့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်) ။
အရင်းအမြစ်များကိုရယူသုံးစွဲခြင်း - အခြား CMS ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်တကယ့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် WordPress ဖြင့်သူတို့သည်နေရာတိုင်းတွင်ရှိသည်။ သတိပေးချက် - ဒါကလည်းပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ WordPress အတွက်အလွန်နည်းပါးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်သော developer များနှင့်အေဂျင်စီများစွာရှိသည်။
Integrated - အကယ်၍ သင်သည်ပုံစံများပေါင်းထည့်ရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုနီးပါးပေါင်းစပ်ရန်ကြိုးစားပါကပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုကို WordPress တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ရှာဖွေရေးလုပ်ပါ ခွင့်ပြုထားသောပလပ်အင်လမ်းညွှန် ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်တစ်ခု Canyon ကုဒ်ရှာတွေ့မှာသိပ်မများဘူး။
customization - WordPress ၏အခင်းအကျင်းများ၊ ပလပ်ဂင်များ၊ ဝစ်ဂျက်များနှင့်စိတ်ကြိုက်စာမူအမျိုးအစားများသည်အကန့်အသတ်မရှိပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးနိုင်သည်။ WordPress သည်တစ်ခုရှိရန်ခက်ခဲသည် APIs ၏စီးရီး ကြောင်းပလက်ဖောင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်လွှမ်းခြုံ။
လုပ်ငန်းအတွက် WordPress ၏ဆိုးကျိုးများ
optimization - WordPress သည် ကောင်းသော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေမယ့်သိပ်မကောင်းဘူး။ သူတို့ကမကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့မှ sitemaps ကိုထည့်သွင်းပါတယ် Jetpack plugin ကိုဒါပေမယ့်အဲဒါလောက်မခိုင်မာဘူး Yoast ၏ SEO plugins များ.
performance - WordPress တွင်ဒေတာဘေ့စ် optimization နှင့်စာမျက်နှာသိမ်းဆည်းမှုကင်းမဲ့သော်လည်းသင်၏ Managed WordPress Host ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေရန်အလိုအလျောက်အရန်ကူးခြင်း၊ စာမျက်နှာသိုလှောင်ခြင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်ကိရိယာများ၊ အမှားမှတ်တမ်းများနှင့် virtualization ရှိရန်မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မဆိုငါလိုအပ်လိမ့်မည်။
နိုငျငံတကာ (I18N) - WordPress စာရွက်စာတမ်းများ သင့်အခင်းအကျင်းများနှင့်ပလပ်ဂင်များကိုမည်သို့မည်ပုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသွင်ပြောင်းလဲ၊ သို့သော်ဒေသတွင်းအကြောင်းအရာများကိုစနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ ငါတို့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးပါပြီ WPML ဒီအဘို့နှင့်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
လုံခွုံရေး - သင် ၂၅% သောဝဘ်ကိုအားဖြည့်သောအခါ၊ သင် hacking အတွက်ကြီးမားသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တဖန်အချို့သောစီမံခန့်ခွဲထားသော hosting များသည်လုံခြုံရေးပြhostingနာများပေါ်ပေါက်လာသောအခါအလိုအလျောက် plugin နှင့် theme updates များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ site ကို update မလုပ်နိုင်သောအခင်းအကျင်းတစ်ခုနှင့်အန္တရာယ်မကျရောက်စေရန်ကလေးများအတွက်အခင်းအကျင်းများတည်ဆောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်အလွန်အမင်းအကြံပြုလိုပါတယ်။
ကုဒ်အခြေစိုက်စခန်း - Themes များကိုဒီဇိုင်းကောင်းများအတွက်မကြာခဏတီထွင်သော်လည်းမြန်ဆန်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်ခေတ်မီသောဖွံ့ဖြိုးမှုများမရှိခြင်း။ ၎င်းသည်ပလပ်ဂင်များနှင့်အခင်းအကျင်းနှစ်ခုစလုံးအားမည်မျှဖွံ့ဖြိုးစွာညံ့ဖျင်းသည်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို themes များ (ပြန်လည်ရေးရန်ကလေးအကြောင်းပြချက်နောက်တစ်ခု) ကိုမကြာခဏတွေ့ရှိရသည်။
Backup တွေကို - WordPress သည်အခကြေးငွေ ပေး၍ ရသောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ VaultPress အဝေးကနေ backup လုပ်ထားပေမယ့်ကုမ္ပဏီဘယ်လောက်များများကဒါကိုသေတ္တာထဲကအင်္ဂါရပ်မဟုတ်ဘဲသင့်ရဲ့ host (သို့) ထပ်ဆောင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကပေးရမယ်ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီဘယ်လောက်များများအံ့အားသင့်မိသလဲဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။
WordPress သည်အလယ်အလတ်နှင့်အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသည်။ ဤနေရာမှအချို့သောစာရင်းများဖြစ်သည် Pantheon.
Tags: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေး wordpressWordPresswordpress ကို conswordpress အကောင်းအဆိုးwordpress အကောင်းအဆိုး cons
Pantheon: New Relic ဖြင့်ပြင်းထန်သော WordPress သို့မဟုတ် Drupal Hosting